मरिच खाँदा हुने यी अचुक फाइदाहरु, थाहा पाईराखौँ – The Sun Nepal
मरिच खाँदा हुने यी अचुक फाइदाहरु, थाहा पाईराखौँ
November 5, 2018 February 24, 2019 [email protected]	0 Comments
मरिच प्रत्येकको घरको किचेनमा पाइने मसला हो । यो खानाको स्वाद बढाउने मसला मात्र नभई एक अचुक औषधी पनि हो, जुन हामीलाई थाहा नहुन सक्छ । सामान्यतय मरिचलाई तरकारीको स्वाद बढाउन प्रयोग गरिन्छ । यसले खानालाई त स्वादिष्ट बनाउँछ नै । स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि अनेकौँ अद्भुत गुणहरु छन् । मरिचलाई बिहानमा तातो पानीसँग सेवन गर्दा हाम्रो शरीरलाई एकदम फाइदा मिल्छ । आयुर्वेदका अनुसार बिहान तातो पानीसँग मरिच सेवन गर्नाले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ । हेर्नुहोस् यसका अद्भुत फाइदाहरु विस्तारमा:
१. डीहाईड्रेशन (पानीको कमी) हुनबाट बचाउनु: यदि तपाइँलाई डीहाईड्रेशन भएको छ भने तातो पानीसँग मरिच खानुहोस् । जसले शरीरमा पानीको कमी हुन दिँदैन ।
२. शक्ति बढाउनु: मरिचले शरीरको शक्ति अर्थात् क्षमता बढाउँछ । साथै कब्जियतको समस्या भएको व्यक्तिहरुका लागि पानीसँग मरिच खानु एकदम फाइदाजनक हुन्छ । यसले शरीर भित्र हुने विकार पदार्थलाई बाहिर निकाल्न सहयोग गर्छ । त्यस्तै एसीडीटिको समस्यालाई पनि दुर गर्छ ।
३. बोसो घटाउनु: मरिचले शरीरमा जम्मा भएर बसेको बोसो घटाउन मद्धत गर्छ । यसले शरीरमा बढी भएको क्यालोरी बर्न गरेर तौल घटाउँछ । यसको लागि तातो पानीसँग मरिच खानुहोस् ।
४. ग्यासको समस्याबाट छुटकारा दिलाउनु: यदि तपाइँ ग्यासको समस्या बाट ग्रसित हुनु हुन्छ भने एक कप पानीमा आधा चम्चा मरिच र आधा चम्चा कालो नुन मिसाएर केहि दिनको लागि नियमित रुपमा सेवन गर्नु होस् । यसले ग्यासको समस्याबाट सधैँको लागि छुटकारा पाउँछ ।
५. यदि घाँटीमा समस्या छ भने मरिचलाई मिस्रिसँग मिसाउने र यसलाई चाटेर खाँदा बन्द भएको घाँटी खोल्छ। यसको साथै ८-१० ओटा मरिचको दाना पानीमा उमालेर कुल्ला गर्नाले घाँटी बस्ने समस्याबाट छुटकारा पाउँछ ।
← दिल्लीमा अलपत्र परेका ४० जना नेपाली महिलाको उद्धार
आज कुन देशको पैसाको मूल्य कति पुग्यो ? हेर्नुहोस् नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (०६ नोभेम्बर, २०१८)को लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर →
धनियाँको पातको जुस जसले ४ दिनमै घटाउँछ भ्यत्ता परेको पेटको बोसो (एकपटक प्रयोग गरौँ)
बारम्बार एलर्जी भएर दिक्क हुनु हुन्छ? प्रयोग गर्नुहोस् यो अचुक घरेलु औषधी
November 4, 2018 [email protected] 0